02B « MMWeather Information BLOG
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ PHAILIN အပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ NARI အကြွင်းအကျန်ကို ဆက်စောင့်ရဦးမည်
By mmweather.ygn, on October 12th, 2013%
စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း PHAILIN(02B)သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကမ်းခြေအား မူလခန့်မှန်းလမ်းကြောင်းအတိုင်း ကျော်ဖြတ်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိကြောင်း previous post တွင် တင်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဆက်လက်၍ စောင့်ကြည့်ရဦးမည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို ကျော်ဖြတ်တိုက်ခတ်လာခဲ့သော တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NARI(24W)သည် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက် ရွေ့လျားနေပြီး လာမည့် ၄၈ နာရီနောက်ပိုင်း(အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက် ည ပိုင်းတွင် ဗီယက်နန်ကမ်းခြေအား ဒါနန်းမြို့အနီးမှ ကုန်းတွင်းသို့ ဒုတိယအကြိမ် ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NARI ကမ်းခြေသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် မုန်တိုင်းအကြွင်းအကျန်များသည် အနောက်တောင်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း တနင်္သာရီတိုင်းဒေသများသို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် ဖေါ်ပြပါဒေသအတွင်း မိုးကြီးနိုင်မည့် အခြေအနေရှိပါကြောင်း ကြိုတင်အသိပေး တင်ပြအပ်ပါသည်။
. . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ PHAILIN အပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ NARI အကြွင်းအကျန်ကို ဆက်စောင့်ရဦးမည်
One comment Uncategorized စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး PHAILIN-02B အိန္ဒိယကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ
အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်၊ ယနေ့ ၁၅း၃ဝ နာရီ( ညနေ ၃ နာရီခွဲ)တွင် စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး PHAILIN ၏ ဗဟိုသည် ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လုနီး အခြေအနေအား ဖေါ်ပြပါ ဂြိုလ်တုပုံတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။
မုန်တိုင်းအဖျားပိုင်းကုန်းတွင်းသို့ စတင်ဝင်ရောက်ပြီးနောက် အင်အားအနည်းငယ်လျော့ကျသွားပြီး အဆင့်-၄ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း(မုန်တိုင်းဗဟိုလေတိုက်နှုန်း ၁၃ဝ နော်တီကယ်မိုင်(150 mph) ဖြင့် ဆက်လက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက် ရှိပါသည်။
Leaveacomment Uncategorized မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လှိုင်းအမြင့် ၅၆ ပေ ရှိမည့် အဆင့်-၅ စူပါဆိုင်ကလုန်း PHAILIN
By mmweather.ygn, on October 11th, 2013%
အဆင့်-၅ စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာပြီး မူလခန့်မှန်းကြောင်းအထက်သို့ ၁၁ မိုင်ခန့် ရွေ့လျားကာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သြရိသပြည်နယ် Brahmapur မြို့အပေါ်တည့်တည့်မှ ဖြတ်ကျော်ကာ ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လျှင် မုန်တိုင်း ဒီလှိုင်းအမြင့် ၅၆ ပေရှိမည်ဖြစ်ပြီး မုန်တိုင်းအားအပြင်းဆုံး စက်ဝန်း အချင်းမိုင် ၈၃ မိုင်ခန့် ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း နောက်ဆုံးရရှိသည့် JTWC warning – 11 တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ မုန်တိုင်းသည် အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီအချိန်တွင် ကုန်းတွင်းသို့ စတင် ဖြတ်ကျော်ချိန်၌ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၁၆၆ မိုင်မှ မိုင် ၂ဝဝ အထိ ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ခန့်မှန်းထားရာ အင်အား အပြင်းဆုံး စူပါဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းတစ်ခုအဖြစ် . . . → Read More: မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လှိုင်းအမြင့် ၅၆ ပေ ရှိမည့် အဆင့်-၅ စူပါဆိုင်ကလုန်း PHAILIN
One comment Uncategorized အဆင့်-၅ စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာမည့် PHAILIN-02B
မုန်တိုင်း (PHAILIN – 02B)က အခု အဆင့်-၄ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာပြီး၊ ဒီနေ့ ညနေ ၆နာရီခွဲမှာ အဆင့်-၅ စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်(ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတွေထဲမှာ အမြင့်ဆုံး အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်) ၁၂ ရက်နေ့ မနက် ၆ နာရီခွဲမှာ အားအပြင်းဆုံးအဆင့်ကို ရောက်မှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း ၁၄၅ နော်တီကယ်မိုင်(တစ်နာရီ မိုင် ၁၇ဝ နီးပါး) ရှိလာပါမယ်၊ သူ့အရှိန်ရဲ့ သက်ရောက်မှုကလဲ ကျနော်တို့ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေအတွက် ပိုများလာနိုင်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက် ၁၈း၃ဝ နာရီ(ညနေ ၆နာရီခွဲ)မှာ အဆင့်-၅ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက် မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်မဲ့ လေတိုက်နှုန်း ခန့်မှန်းမြေပုံ (GFS MODEL)ကို တင်ပြထားပါတယ်။ Facebook . . . → Read More: အဆင့်-၅ စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာမည့် PHAILIN-02B
Leaveacomment Uncategorized ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်သို့ စတင်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိသည့် မုန်တိုင်း 02B
By mmweather.ygn, on October 9th, 2013%
အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 02B သည် အနောက်မြောက်ဘက် (Heading 290 degrees)သို့ တစ်နာရီ ၇ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပြီး အန်ဒါမန်ကျွန်းမြောက်ပိုင်းအား Subashgram မြို့ မြောက်ဘက်မှ ကပ်၍ ကျော်ဖြတ်ကာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါသည်။
မုန်တိုင်း 02B ၏ နောက်ဆုံးရတည်နေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုကိုးကျွန်းလေဆိပ်၏ အနောက်တောင်ဘက် ၆၅ မိုင်ခန့်၊ လပွတ္တာမြို့ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၂၃ဝ ခန့်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး၊ မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၄၅ မိုင် မှ မိုင် ၆ဝ ခန့်အထိ ရှိပြီး၊ လှိုင်းအမြင့် ၁၂ . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်သို့ စတင်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိသည့် မုန်တိုင်း 02B
Leaveacomment Uncategorized အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမည်ရ မုန်တိုင်း 02B အိန္ဒိယသို့ ဦးတည်
ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့အတွင်းတွင် အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့မှ စတင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 90W သည် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီ JTWC မှ သတိပေးထုတ်ပြန်ချက် Warning-01 အရ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 02B ဖြစ်လာပါသည်။
မုန်တိုင်း 02B သည် အနေက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး အောက်တိုဘာလ ၁ဝ ရက် – မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈း၃ဝ နာရီတွင် အဆင့်-၁ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အဖြစ်သို့ လည်းကောင်း၊ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက် – မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီတွင် အဆင့်-၂ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ လည်းကောင်း အသီးသီး ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပါသည်။ (ပုံ-၁)
. . . → Read More: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမည်ရ မုန်တိုင်း 02B အိန္ဒိယသို့ ဦးတည်
Leaveacomment Uncategorized မုန်တိုင်း NILAM(02B) အိန္ဒိယ၊ အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းအား စတင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်
By mmweather.ygn, on October 31st, 2012%
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း NILAM(02B) သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တမီလ်နာဒူးပြည်နယ် ချင်နိုင်း(Chennai) မြို့၏ တောင်-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၉၀ ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်တွင် ဆက်လက်ဗဟိုပြုနေပြီး၊ လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ မိုင် ၂၀ နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း NRL data များအရ သိရပါသည်။
အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၂ နာရီတွင် ရရှိသည့် ဂြိုလ်တု Animation ပုံအရ မုန်တိုင်းသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းခြေအား စတင်၍ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ http://www.ssec.wisc.edu/data/geo/index.php?satellite=fy2e&channel=ir2&coverage=fd&file=jpg&imgoranim=8&anim_method=flash
. . . → Read More: မုန်တိုင်း NILAM(02B) အိန္ဒိယ၊ အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းအား စတင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်
Leaveacomment Uncategorized အိန္ဒိယနိုင်ငံ တမီနာဒူးပြည်နယ် ချင်နိုင်းမြို့အနီးမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း NILAM(02B)
By mmweather.ygn, on October 30th, 2012%
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်တောင်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း NILAM(02B) သည်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၂၁၃၀ နာရီအချိန်တွင် ရရှိသည့် ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံ အရ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း – တမီလ်နာဒူးပြည်နယ်၊ Chennai မြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၃၀၀ ခန့်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး၊ အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၆ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း TS NILAM(02B)သည် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ အိန္ဒိယ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၅ နာရီခန့်မှ စတင်၍ တမီလ်နာဒူးပြည်နယ် Chennai နှင့် Kelambakkam မြို့များကြားမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
. . . → Read More: အိန္ဒိယနိုင်ငံ တမီနာဒူးပြည်နယ် ချင်နိုင်းမြို့အနီးမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း NILAM(02B)
Leaveacomment Uncategorized မုန်တိုင်း 02B(TWO) ၏ အကြွင်းအကျန်များ
By mmweather.ygn, on October 20th, 2011%
မုန်တိုင်း 02B သည် အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် အဖြစ် ကပ္ပလီပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်၊ စတင်ဖြစ်ပေါ်ချိန်မှ ၂ ရက်ခန့်တွင် အားပျော့နေခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီခွဲတွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အလယ်ပိုင်း၌ ပြန်လည် စုစည်းလာကာ ပိုမိုအားကောင်းလာခဲ့ပြီးနောက် ၄င်းနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီခွဲ NRL data များတွင် ဗဟိုဖိအား 1006 hPa သို့ စတင် ကျဆင်းလာကာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
94B သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး NRL data များအရ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက် . . . → Read More: မုန်တိုင်း 02B(TWO) ၏ အကြွင်းအကျန်များ
Leaveacomment Uncategorized 02B ဝင်ရောက်ပြီး မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ
အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း 02B (TWO) ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက် – ည ၂၄း၃ဝ နာရီတွင်ရရှိသည့် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေများကိုနာဆာမှ တင်ပြထားသည့် အတိုင်း ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။
﻿Areas with Severe Flood Potential on 10/19/2011 1800Z
COUNTRY WATER LEVEL & Latitude/Longitude NEARBY LOCATION Burma 128mm 20.38 94.38 မိုးရွာသွန်းသည့် တည်နေရာ အညွှန်း ~ 107.38km from NYAUNG-U/PAGAN 21.20 94.92 Burma 128mm 21.12 93.38 ~ 65.80km from . . . → Read More: 02B ဝင်ရောက်ပြီး မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ
One comment Uncategorized Older Entries »